Munguva ichangopfuura, NCPCVET yakahwina itsva zvinodhaka advertising nokuti nyika yechipiri-kirasi idzva wemhuka drugs- "Gamithromycin" uye "Gamithromycin jekiseni."
Gamithromycin munhu itsva Semi-chakaita zvokugadzirwa macrolide mushonga. Parizvino, tylosin uye tilmicosin anoshandiswa nevakawanda sezvo macrolides. zvinodhaka izvi zvinoshandiswa kudzivirira kana kubata zvirwere kufema mune mombe uye nguruve. Vari Kazhinji zvokudya nezvinonhuwira kana mvura yokunwa. Kuvhiringidzwa muzvidzivirire kana kurapwa inoda mazuva akawanda chourongwa inodzokororwa. Kunyange yabudirira migumisiro yakanaka, asi kuwedzera kushandiswa nguva, kwave kunosiyana inosiyana kurapika munzvimbo dzakawanda, pamwe kuwedzera uwandu kurapwa ipfupi zvishoma nezvishoma.
The jekiseni gamithromycin yakataurwa NCPCVET ari gadziriro chinoitirwa nokusanganisa, prefiltering, chena filtration, uye aseptic zvekupfakira. Rine zvinotevera zvazvakanakira: Chokutanga, rimwe dose pamusoro subcutaneous / tsandanyama jekiseni Intramuscular jekiseni, vasina jekiseni angapedza dambudziko. Yechipiri haisi chete kushandiswa kudzivisa mombe zvirwere zvokufema, asiwo chaiwo mugumisiro zvirwere zvokufema mu nguruve. Chechitatu ndechokuti simba kwenguva refu zvazviri, hapana divi migumisiro, efficacy akasimba kupfuura tylosin, tilmicosin nezvimwe zvikuru kushandiswa macrolide zvinodhaka. Wechina zvakanakira yakafara antibacterial chakarondedzera, simba antibacterial basa, kukurumidza Absorção de Água, mukuru bioavailability, pasi vakasara, kuchengeteka uye yakakwirira kunyatsoshanda.
Anobudirira kushandiswa chigadzirwa ichi chichakubatsira optimize kuti maindasitiri maumbirwo China wemhuka zvinodhaka zvigadzirwa, zvakare kundosangana musika vade, uye kuwedzera mumusika makwikwi pakati rwendo zvinodhaka wemhuka.
Post nguva: Jun-26-2018